समानुपातिकमा पहिलो पार्टी को? विवेकशील-साझा र राप्रपा बन्छन् राष्ट्रिय पार्टी? - Khula Patra
प्रकाशित समय: १८:०८:०४
बिहिबार मतदान सकिने बित्तिकै चुनाव परिणाम सम्बन्धि पहिलो विश्लेषण लेखेको थियो सेतोपाटीले (के वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ?) सो विश्लेषणमा हामीले वाम गठबन्धले ठूलो बहुमतका साथ जित्ने बताएका थियौं।
तर २०४८ सालदेखिको ‘ट्रेन्ड’ हेर्ने हो भने लोकप्रिय मतमा कांग्रेसको अंश लगातार घटदै गएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मत बढ्दै गएको छ।
एमालेले पछिल्ला वर्षहरूमा बढाउँदै लगेको लोकप्रिय मतको ‘ट्रेन्ड’ यसपाली पनि कायमै रहने सम्भावना छ। भारतीय नाकाबन्दीको समयमा एमाले र विशेषगरी सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले लिएको अडानले उसको लोकप्रियता बढेको छ।
‘अधिनायकवाद’ विरूद्ध लड्ने कांग्रेसको प्रमुख नारामा मतदाता आकर्षित भएको हामीले पाएनौं। कांग्रेसको चुनाव प्रचारको नेतृत्व गरिरहेका पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै नयाँ मतदातालाई आकर्षित गर्न सकेका छैनन्। त्यस कारणले पनि कतिपय नयाँ मतदाता एमालेतिर आकर्षित भएका छन्।
हामी मधेसका जिल्ला घुम्म जाँदा यी दुवै पार्टीको पक्षमा मधेस आन्दोलनको ‘सेन्टिमेन्ट’ बलियो रहेको पायौं। त्यसले पनि उनीहरुको केही मत बढ्न सक्छ। प्रत्यक्षमा कांग्रेस, एमाले वा माओवादी दललाई भोट दिने कतिपय मतदाताले यसपालि समानुपातिकमा फोरम वा राजपालाई मत दिन सक्छन्।
‘त्यो बेला हिन्दु राज्यकालागि सभा भनेपछि कति मान्छे आउथे। अहिले यहाँ हिन्दुराज्यको चर्चा समेत छैन,’ उनले भने।
‘संविधानमा हिन्दु राज्य त लेखेन तर गाई भनेको त माता हो। तपाईँ मातापिताले गालि गर्‍यो भनेर रिसाउनुहुन्छ? हामी पनि गाई छाप छोड्न सक्दैनौँ। एउटा भोट गौमाताको छाप भएकोले उसैलाई दिने हो,’ उनले भने।
‘किन नदिने?’ हाम्रो प्रश्न भुईँमा झर्न नपाउँदै उनको छेउमा उभिएका राजेश गुप्ताले उत्तर दिए, ‘राप्रपाले गाई बेचेर खाइसक्यो किन दिने? देख्नु भो यसपाली राप्रपाले वडामा समेत जितेन। वीरगन्जमा त यसपाली प्रत्यक्ष उम्मेदवार पनि उठाएको छैन।’
सेतोपाटी डट कमबाट ।